Ndị Briten na-ekwu na gburugburu ebe obibi na nkwado bụ ihe dị mkpa mgbe ị na-ahọrọ njem
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Ndị Briten na-ekwu na gburugburu ebe obibi na nkwado bụ ihe dị mkpa mgbe ị na-ahọrọ njem
COP 26, na-ewere ọnọdụ n'otu oge ahụ dị ka WTM London, ga-eweta nkwado n'elu nke akụkọ akụkọ, na ụlọ ọrụ njem chọrọ ịgbanwe mmasị a n'ime ihe.
Ihe karịrị ndị njem UK atọ n'ime anọ na-ekwu na gburugburu ebe obibi na nkwado bụ ihe dị mkpa mgbe ị na-ahọrọ njem, na-ekpughe nchọpụta e wepụtara taa (Monday 1 November) site na WTM London.
Akụkọ ụlọ ọrụ WTM chọpụtara na 78% nke ihe nlele 1000 siri ike jikọtara ụfọdụ ọkwa dị mkpa na gburugburu ebe obibi na nkwado. Ihe dị ka otu n'ime mmadụ ise (18%) kwuru na ọ dị oke mkpa na ụfọdụ otu n'ime anọ (23%) họọrọ maka ezigbo mkpa.
Mana nzaghachi a na-ahụkarị na ajụjụ ahụ hụrụ ihe karịrị otu n'ime atọ (38%) ndị Briten na-akọwa okwu ndị a dị ka "dịtụ mkpa".
N'aka nke ọzọ, a ka nwere ndị njem Britain siri ike bụ ndị na-enweghị nkwenye, na 16% na-ewepụ nkwado dị ka ọ bụghị ihe dị mkpa na 7% na-ekwu na ọ dịghị.
Azịza nke ajụjụ ndị ọzọ dị na akụkọ ahụ na-ekpughekwa ọtụtụ ndị Briten na-anwa ime njem nke ọma mana ọ ka nwere pere mpe na-ajụ ime mgbanwe omume ya.
Mmalite na omume dị ka iji akwa nhicha, imegharị ihe, na ịgbalị ịzụta ngwaahịa na ọrụ mpaghara bụ ndị ama ama n'etiti ihe nlele ahụ. Agbanyeghị, 15% enweghị mgbagha na nzaghachi ha, nke bụ na ha echebaraghị gburugburu ebe obibi ma ọlị mgbe ha na-eme njem.
Simon Press, Onye isi ihe ngosi ngosi, WTM London, kwuru, sị: "Ụlọ ọrụ njem nwere n'ụzọ doro anya na ọ nwere ụzọ ọ ga-esi mee ka ndị ahịa niile kwenye mkpa ọ dị ịmalite iche echiche nke ọma banyere mmetụta gburugburu ebe obibi na nke na-adịgide adịgide nke njem anyị.
"COP 26, na-ewere ọnọdụ n'otu oge dị ka WTM London, ga-eweta nkwado n'isi nke akụkọ akụkọ, na ụlọ ọrụ njem kwesịrị ịgbanwe mmasị a n'ime ihe. Ụlọ ọrụ ahụ bụ n'ezie nkwa maka ikere òkè ya n'ibelata mgbanwe ihu igwe. "